I-PadRentals: I-Condo ye-2-Bedroom epholileyo #5 - I-Airbnb
I-PadRentals: I-Condo ye-2-Bedroom epholileyo #5
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguGwendolyn
Ukunikezelwa yindlu esandula ukwakhiwa, inefenitshala entle kwaye ihonjiswe kakuhle enamagumbi amabini ekhondom / iphedi eRichmond Gate Estate kwindawo ye-Ikate-Elegushi Lekki. Le condo ibonelela ngazo zonke izinto eziphathwayo eziza nekhaya losapho olunye, kwindawo epholileyo kunye neyokuphumla yokuphumla ikunika intuthuzelo yekhaya ngelixa ukude nekhaya.
I-condo yondlalwe kwimigangatho emibini kwaye ifanele ukuhlala ngokukhululekileyo kwiindwendwe ezi-4. Kumgangatho ongezantsi kukho igumbi lokuhlala elipholileyo, indawo yokutyela kunye nekhitshi esebenza ngokupheleleyo kunye nendlu yangasese yeendwendwe.
Igumbi lokuhlala line-55 "i-TV edibeneyo kunye nenkqubo yokuzonwabisa yasekhaya ye-BOSE ngelixa i-master bedroom ine-49" ye-TV (zombini i-TV inikezela nge-HDMI izibuko zedatha yakho ephathekayo / umxholo weTV).
Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi okulala ama-2, i-en-suite nganye ineshawari yayo, indlu yangasese, isifudumezi-manzi kunye neesokethi zokucheba zombane ezimbini. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulu, ngelixa igumbi lesibini linebhedi enkulukazi.
Indawo yokutyela entle nepholileyo ihlala abantu abadala aba-4 ngokukhululeka.
Indawo yasekhitshini inika isiqithi, i-pantry kunye nendawo eyaneleyo yekhabhathi. Izixhobo zombane zibandakanya umatshini wokuhlamba / i-combo yokomisa, ifriji / isikhenkcisi, i-microwave kunye ne-4-burner induction hob.
Zonke izithuba (kubandakanywa nekhitshi) zine-air-conditioning ngokupheleleyo. Kukho i-WiFi yasimahla kunye nomabonwakude wentambo enoluhlu lwamajelo onokukhetha kuwo.
Ukucocwa okuncomekayo kubonelelwa kanye ngeveki ngokuhlala iintsuku ezisi-7 nangaphezulu.
Umbane uqinisekisiwe iiyure ezingama-24 kunye ne-inverter yamandla e-in-line enikezelweyo ukuqinisekisa ukuba akukho kucima kwenzeka ngexesha lokutshintsha phakathi kwamandla egridi kunye nejenereyitha.
Le propathi ikumgama wokuhamba ukuya kwiNike Art Gallery kunye nohambo olufutshane ukuya kwezinye iindawo ezininzi zokuzonwabisa zeLekki njengeFilmhouse (IMAX) Cinemas, Circle mall kunye neLekki Conservation Centre, kunye neVictoria Island kunye ne-Ikoyi.
Umbuki zindwendwe ngu- Gwendolyn
I-smartlocks zanamhlanje zivumela iindwendwe ukuba zinikwe iikhowudi zokupasa ezizodwa ukuze zihlale zingena kwaye zifikelele kwiiyunithi.
Undwendwe lunofikelelo olukhethekileyo kwiflethi yonke.
Siyafikeleleka ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Undwendwe lunofikelelo olukhet…